Kroger Chefbot: Kiis Isticmaal Weyn oo Lagu Bixinayo Qiimaha Warbaahinta Bulshada ee Teknolojiyada Bot | Martech Zone
Arbacada, Oktoobar 28, 2020 Talaado, Oktoobar 27, 2020 Douglas Karr
Kroger waa silsilad supermarket maxalli ah oo aan runtii jeclahay. Waxay bixiyaan guri-keenis, soo-qaadis, is-iibin, isbaaro-bixiyayaal, iyo in ka badan. Shirkaddu waxay aqoonsan tahay bixinta labadaba qiimaha iyo adeegga macaamiisha ayaa muhiim u ah guusha urur kasta.
Tikniyoolajiyadda, dabcan, waa qaab loo dejiyo tan. Taas macnaheedu maahan in dadka iyo geeddi-socodka aysan macno lahayn, waxay kaliya ka dhigan tahay in maalgashi si loo siiyo qiimo macaamiishaada ugu dambeyntii ay tahay maalgashi ku saabsan aragtida sumaddaada.
Soo bandhigida Kroger Chefbot
Hal-abuurnimadooda ugu dambeysay runti waa qabow… the Kroger Chefbot. Waa tan sida ay u shaqeyso:
Sawir ka qaad cuntada aad haysatid.
Ku dhaji sawirkaaga @KrogerChefbot
Bootada ayaa dib u soo diri doonta cuntada sida u macaan!
Lagu horumariyey iskaashi lala yeesho hay'ad isku dhafan oo isku dhafan iyo hay'ad warbaahineed 360i, iyo la-hawlgalayaasha tikniyoolajiyadda Shaybaarada Qaxwada Kroger's Chefbot wuxuu bixiyaa xal wada hadal saaxiibtinimo leh oo loogu talagalay ka go'ida howlaha waqtiga caadiga ah ee cuntada iyo qashinka cuntada guriga aan loo baahnayn — caqabadaha guud ee dad badan maadaama qoysasku sii wadaan inay kuwada raaxeystaan ​​cunno badan guriga.
Isticmaalka Cadaynta, Chefbot's AI wuxuu falanqeeyaa sawirrada si loo aqoonsado ku dhowaad 2,000 oo maaddooyin ah, oo laga furayo 20,000 cuntada Kroger ee loogu talagalay dadka isticmaala inay karsadaan.
Khibradaha Chefbot waxaa ka mid ah baraha taabashada badan, oo bixiya kaqeybgal bulsho oo xiiso leh iyada oo loo marayo Twitter oo lagu lifaaqay Kroger.com is dhexgalka ganacsiga e-commerce. Waqti ka dib fikradaha la bartay, Aqoonsiga cuntada ee Chefbot iyo tikniyoolajiyada raadinta cuntada ayaa horumarin doonta oo hagaajin doonta, taas oo u oggolaanaysa fursadaha qalabkan xoogga leh in lagu hormaro.
Haddaba Sidee Fiican Ayuu U shaqeeyaa Chefbot?
Waxay u shaqeysaa sifiican! Dabcan, waxaan isku dayay inaan ku tuuro kubad curyaam ah oo ay ku jiraan maaddooyin yaab leh markii hore… taas oo aan caddaalad ahayn! Tijaabadii labaad ee aan sameeyay, miiska waxaan saaray boorso digaag la qaboojiyay iyo medley la qaboojiyay oo aan diray.
Waxaan helay jawaab deg deg ah:
Chefbot iskaan: broccoli, iyo digaag.
Haddii jawaab sax ah: "OK"
haddii kale, qor waxyaabaha ay ku kala go'een koomaha xisaab sax ah. Mahadsanidiin! pic.twitter.com/4NW7KwyW8B
- Kroger Chefbot (@KrogerChefbot) October 27, 2020
Markii aan ka jawaabey, OK:
Kuwani waxay kugu ahaan doonaan wax aad u macaan ... maxaa loogu yeeraa (?) Processor processor (?)
Waa tan waxa aan kuu helay inaad sameyso: https://t.co/Sp3EMNmlrY pic.twitter.com/RcoW4prg1U
Natiijadu waxay ahayd xoogaa fiican fikradaha karinta! Haddii aad nitpicking tahay… waxaad u badan tahay inaad tiraahdo farsamo ahaan ma ahayn broccoli oo boorso aan haysto. Run… oo waxaan la yaabanahay haddii, taa beddelkeeda, Kroger uu isticmaali karo aqoonsiga dabeecadda marka lagu daro aqoonsiga muuqaalka si uu uga gudbo maaddooyinka leh alaabada dhabta ah ee ku jiri kara cuntada.
Si kastaba ha noqotee, waa adeeg weyn. Iyo, shaki kuma jiro inay Kroger ka hesho wacyigelin nooc ah iyo sidoo kale xoogaa qadarin ah caawinta. Waxaan ahay cunto kariye lousy… marka waxaan rajeynayaa inay iga caawin doonto inaan horumariyo!
Tags: aicunto kariyeCunto karisdukaanka raashinkakrogerdukaanka